Vahaolana anatiny sy ivelany azo iainana
-Fampiasana bebe kokoa
-Manohana fampiharana hafa
-Mety kokoa ROI (fiverenana amin'ny fampiasam-bola)
-Panel lanja 13Kg fotsiny
-Mihoatra ny 20% maivana noho ny vokatra mahazatra
-Fametrahana lehilahy iray
-Fananganana boaty herinaratra haingana
HANJAKANA LED LED amin'ny fampiasana PROFESSIONAL
Ny efijery LED Rental ho an'ny fijoroana sy fihaonambe dia tontonana LED afaka mamerina sary sy horonantsary avo lenta miaraka amin'ny famirapiratana izay ambony noho ny fitaovana hafa, toy ny mpanara-maso nentim-paharazana sy ny projet tsy mamela ny hahita ny atiny tsara, na noho ny tsy fisian'ny hazavana na manelingelina taratra amin'ny seho nasehon'izy ireo. Amin'izany fomba izany dia azo antoka ny famirapiratana tsy azo resena.
Ny efijery fanofana dia mety indrindra ho an'ireo matihanina mandray anjara amin'ny kongresy na fampiratiana, izay mila mivory mora, efijery maivana ka mora entina avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Ny fampidirana ireo rafitra fanangonana haingana sy fanesorana haingana dia manome antoka ny fomba fametrahana mora kokoa sy mora kokoa raha oharina amin'ireo rafitra efijery LED hafa.
AIZA NO INDRO NY SCREENS LED RENTAL?
Ny efijery LED fanofana dia manome tombontsoa marobe. Talohan'izay dia nampiasaina hanaovana izany ny rindrina sy ny tetikasa vidéo. Ankehitriny, amin'ny alàlan'ny efijery LED manofa, azo atao ny manana efijery lehibe kokoa sy manazava kokoa, misarika ny sain'ny mpanatrika hetsika.
Satria ny vokatra LED dia vokatra vaovao, ny vidin'ny fanofana dia mavesatra, noho izany, orinasa manofa maro no manapa-kevitra ny hanararaotra ny fangatahana avo lenta ary hampiasa vola bebe kokoa amin'ity karazana vokatra ity.
FAMPIASAANA SY FAMPIHARANA AN'NY SCREENS LED ho an'ny fanofana
Namboarina ireo efijery ireo mba hahafahan'ny matihanina mampiseho ny vokatra sy serivisin'izy ireo amin'ny foara sy kaongresy afaka mampiseho ny vokatr'izy ireo amin'ny endrika lehibe sy amin'ny fomba manaitra. Ireo mpamatsy fitaovana Audiovisual mikarakara fampisehoana, fampisehoana na hetsika dokam-barotra dia mpividy efijery LED mahazatra ihany koa hahafahan'izy ireo manofa izany amin'ny antoko fahatelo.
Ny efijery LED hofan-trano no safidy tsara indrindra hiavaka amin'ny hetsika rehetra, satria azo atao ny manamboatra sy manova ny haben'ny efijery. Noho izany, safidy hafa be dia be ho an'ny matihanina amin'ny sehatry ny audiovisual izy io.
Ny rafi-panangonana modular sy ny elektronika manan-tsaina dia ahafahanao mampifanaraka ny habeny mifanaraka amin'izany. Tsy mila manangona ireo takelaka LED mifanaraka amin'ny habe ilaina fotsiny ianao. Izany dia ahafahana mizara efijery lehibe hanofana trano kely kokoa.
Tombony lehibe iray hafa ny famahana ny vahaolana sy ny kalitaon'ny sary omen'ny efijery LED fanofana, izay tsara indrindra amin'ny tolotra LED napetraka maharitra tsara indrindra. Noho ny toetrany teknika mandroso, ny efijery LED manofa dia manome sary an-tsary tonga lafatra ny sary, na dia eny ivelany sy amin'ny tara-masoandro manontolo.
Safidy Pixel Pitch
zavatra FV Series FV Series FV Series
Pixe Per Sq.m 65536 Pixel 65.536 Pixel 43,264 Pixel
Famirapiratana (Nits / ㎡) 1100 Nits 4500 Nits 4500 Nits
Fiarovana IP IP43 IP65 IP65
Fomba fikojakojana Azo atolotra aoriana
Fitaovan'ny kabinetra Die Casting Aluminium
Haben'ny Module (W * H) 250mm * 250mm
Haben'ny kabinetra (W * H * D) 500mm * 500mm / 500mm * 1000mm
Mari-pana loko 9500K ± 500 （azo ovaina）
Mizana volondavenona 14-16Bit
Kabary lanja 7KG / 12KG
Fanjifana herinaratra antonony 350-400Watt / ㎡
Max Fanjifana herinaratra 800Watt / ㎡
Temperature miasa -20 ° C hatramin'ny 50 ° C
Angola miolikolika ± 15 degre
Manaraka: Panel P3.91 Hetsika ivelan'ny trano Rental LED Wall Panel
P3.91 efijery fampisehoana LED ao anaty trano
Seho fisehoana LED P2.97 fisehoan-javatra ao anaty trano